विद्युत प्राधिकरणको नाफा सात अर्ब भन्दा धेरै ! - Kantipath.com
विद्युत प्राधिकरणको नाफा सात अर्ब भन्दा धेरै !
काठमाडौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरि ऊर्जा जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७ अर्ब २० करोड नाफा भएको बताए।
आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा साढे २ अर्ब मात्र नाफा भएको थियो भने १४९ प्रतिशतले ०७५/७६ नाफा बढेको हो । गएको आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले १५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा गरेको छ। यस्तै चुहावट पनि १५.३२५ मा झरेको छ। यो अघिल्लो वर्ष भन्दा ५.१३ प्रतिशतले कमी हो। आव २०७४/७५ मा चुहावट २०.४५५ रहेको थियो।
यस्तै गत वर्ष ७ अर्ब ५५ करोड युनिट बिजुली खपत भएको छ। यसमध्ये प्राधिकरणको ३४५,निजी उत्पादकको २९५ र भारतबाट ३७ प्रतिशत आयात भएको छ। यस्तै अहिलेसम्म ७८५ अर्थात ४५ लाख नागरिकको घरमा बिजुली पुगेको छ। गत वर्ष मात्रै १०५ ग्राहक बढेका छन्।
Previous Previous post: प्रकाश दाहालको नाममा दुबईमा २१ अर्ब रुपैँया रहेको पुष्टि गर्न चुनौती
Next Next post: बुढा-बुढी विचको झगडा छुट्याउँदा लालमायाको गयो ज्यान
हुम्लाका सातमध्ये ६ वटा गाउँपालिकाको बेरुजु १६ करोडभन्दा बढी
गरिवी निवारणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण- मन्त्री थापा
विश्व आर्थिक वद्धि ३ प्रतिशतले ऋणात्मक, अर्थतन्त्रमा ९० खर्ब डलरको क्षति